अहंकारवाद बाेक्नाले थला पर्‍यो राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रकाे मुद्धा ! - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २२, २०७७ समय: ५:१८:५८
अहंकारवाद लाई कुनै बेला समयले सोध्यो – सत्ताभोग खोज्ने कि मुद्धा र एजेन्डाका लागि भरोसामा अड्ने ? महाभारत युद्ध पूर्व सहयोगका लागि द्वारिका पुगेका अर्जुन र दुर्योधन लाई भगवान श्रीकृष्णले पनि यस्तै प्रश्न सोध्नु भएको थियो । श्रीकृष्णले सोध्नु भयो ।।। तपाई हरू दुइले युद्धका लागि कसलाई रोज्नु हुन्छ रु सशस्त्र यादव सेना रोज्ने कि निस्शस्त्र मलाई रोज्ने ? एक चिज रोज्न सक्नु हुन्छ ।
त्यो सुन्नासाथ अहंकारी दुर्योधनले सशस्त्र यादव सेना रोज्यो तर अर्जुनले भने निस्शस्त्र भएपनि मलाई श्रीकृष्णको सहयोग भए पुग्छ भन्दै विन्ती गरे । यस्तै प्रकृतिको प्रश्न राप्रपा भित्रको अहंकारवाद लाई पनि समयले नसोधेको होइन । तर अहंकारवादले भन्यो । मुद्दा र एजेन्डाको भरोसामा अड्दा मलाई के मिल्छ ? सत्ता भोगले मलाई शान दिन्छ , मान दिन्छ , धन दिन्छ , विदेश शयरको अवसर दिन्छ , पांडे पजनीको मौका दिन्छ अनि साइरन बजाउदै मेरो अघि पछि सशस्त्रको भ्यान पनि गुड्छ ।
किन्तु विचार र मुद्दामा अडि रहे त्यो सबै मलाई कसले दिन्छ ? त्यसैले राजा र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा हात्तीको देखाउने दांत थियो तर भित्री चपाउने मक्सद भनेको सबै च्यांखे मात्र । किनकि २०७४ को आम निर्वाचनमा संघीय संसदको १६५ सिट मध्ये १६१ स्थान गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षवादी काङ्ग्रेस लाई छोडेर ४ सिटमा मात्र उम्मेदवार उठाउनु च्यांखे नभएर के त्यो अन्यथा थियो ? १६५ सिटको दुई तिहाई भनेको ४ सिट नै हो भन्दै गीताले तिनलाई उपदेशमा सुनाएको थियो ? त्यो ४ सिट जितेका भए २०७४ मा नै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्किने थियो ?
राजसंस्था र धर्मको नारा लाई नाफा र नोक्सानको थोक व्यापार बनाउदा राजा र धर्म प्रति अघात आस्था राख्ने आम नागरिक हरूले २०७४ को चुनावमा गाई खोजे तर भेटेनन । थारो गाई नै भएपनि कतै भेट्न सकिन्छ कि भन्दै खोजे त्यो पनि भेट्न नसक्दा च्यांखेले धोका दियो भन्दै कोही काङ्ग्रेस अनि कोही कम्युनिस्टमा लाग्नु पर्दा सत्तो सराप गर्दै उनिहरू त्यतै हराए । जसका कारण आज हामी जनताको माझमा पुगेर पार्टीको विचार र मुद्दा बारे बहस गर्दा तिनै मतदाता हरूले हामीलाई प्रश्न गर्छन । राजसंस्था र धर्म लाई देखाएर यस अघि गाइको पुच्छर समेत बेच्यौ । अब फेरि के बेच्न आयौ? यस्तै प्रश्न हरूको सामना गर्नु परेको छ ।
एउटा परिपक्व विचारको जन्मस्थली मात्र होइन समस्त ॐकार परिवार हरूको उत्पत्तिस्थली थियो राप्रपा तर सत्ता र शक्तिको मोहमा बेचिएर त्यसको मुहान नै क्षतविक्षत बनाइयो । समस्त यज्ञयवादी ( आस्तिक ) हरूको भरोसाको घर थियो राप्रपा तर अहंकारको रांको झोस्दै त्यो सबै भष्म खरानी बनाइयो । सबै धार्मिक र आध्यात्मिक सनातनी हरूको पुष्प वाटिका अनि सम्पूर्ण सम्बर्द्धन वादी हरूको मुलस्थान थियो राप्रपा किन्तु राजसंस्था र धर्म फर्काउने ठेकेदार देखाउने पाखण्ड चरित्रका कारण विचार र सिद्धान्तको त्यो सिर्जन भूमि पुरै शुष्क र बांझो बनाइयो । जनताको जीवन पद्धति संग जोड्नु पर्ने विचार , मुद्दा र एजेन्डाको मौलिक परिचय हरू ।
समस्त यज्ञयवादी ( आस्तिक ) हरूको भरोसाको घर थियो राप्रपा तर अहंकारको रांको झोस्दै त्यो सबै भष्म खरानी बनाइयो ।गणतन्त्रको कालो संबिधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै सत्ता र कुर्सीमा लगेर जोडेपछि साराका सारा नयाँ पुस्ता हरूको मूल्य मापन गर्ने हृदय नै डढाइयो ।
गणतन्त्रको कालो संबिधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै सत्ता र कुर्सीमा लगेर जोडेपछि साराका सारा नयाँ पुस्ता हरूको मूल्य मापन गर्ने हृदय नै डढाइयो ।राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र फर्काउने नाममा यसरी जलाएर खरानी बनाइएको चिज वन जङ्गल प्रकृति भए फेरि पलाएर आउने थियो होला तर जलेर भस्म भएको विचारका ती मानव आत्मा हरूलाई फेरि तिनै पात्र र प्रवृत्ति बाट कसरी फर्काउन सक्ने ?
किन्तु अझपनि मार्गचित्रका नाममा क्रमभङ्ग वादी प्रवृत्तिको अहंकारका कारण जताततै अपमानित हुनु पर्दा समेत त्यसको जिम्मेवार कारक तत्वका रूपमा रहेको अपराध लाई पिठ्युंमा नाम्लाले बोकेर अपराधी खोज्दै काठमाण्डौ बाट छैमले तर्फ जान्छौं भने ।
हामी पनि त्यो अपराधको हिस्सेदार नै हुनेछौं । त्यसैले पार्टी भनेको विचार , मुद्दा र एजेन्डाको मन्दिर हो र त्यो आस्थाको मन्दिर लाई पवित्र राख्न आकाशको बाज देखाएर जमिनको परेवा भुर्कुट पार्ने ढोंगी पण्डा बाट अब सुरक्षित राख्न सक्नु पर्दछ भन्दै सचेत रहन यो लेख मार्फत आग्रह गरिएको हो ।
अन्तमा मैले यसरी लेखिरहदा यो लेखको उद्देश्य भनेको रोगी प्रतिको घृणा कदापि पनि होइन । रोगको पहिचान गरि त्यो रोग लाई मेजर अप्रेसन गरि मिल्काएर पार्टी लाई नयाँ जीवन दिन सक्नु पर्दछ भनेको हो । यो लेख कुनै व्यक्ति प्रतिको पूर्वाग्रह होइन । केवल रोगको निर्मलीकरण गरि विचारको मन्दिर बचाउन सबै राष्ट्रवादी हरूको ऐक्यबद्धताका लागि गरिएको आव्हान हो ।
लेखक राप्रपा संयुक्त प्रदेश न १ का सचिब हुनुहुन्छ ।
राणा र लोहनी लाई प्रश्न ,राप्रपा एकता किन ?
गणेश प्रसाद दुलाल / मुलुकको राजनीतिमा आफ्नै मौलिक अस्तित्व र पहिचान बोक्न सफल भैरहेको राप्रपा संयुक्त कमल थापाको राप्रपा...
डा. बिपेश आचार्य निर्देशक पुर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालय,शिक्षण अस्पताल गोठगाउँ ,,सुन्दरहरैंचा कोरोनाको कहरले विश्व भरीनै त...
काेराेनाकाे कहर , लकडाउन र टाेल बिकास संस्थाकाे भुमिका
कोरोना भाइरस ( कोविड १९ ) को महामारीले बिश्व अक्रान्त छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन । अझ प्रदेश एकमा भाइरसबाटै संक...
कोभिड —१९ , यूवाहरुको समस्या र समाधानका उपायहरु
कोरोना भाइरस, (कोभिड —१९) संग यतिवेला तपाईं–हामी मात्र होइन, सिंगो विश्व जुधिरहेको छ । दिनहुँ बढिरहेको मृत्युको स...